Waa tuma Sacdiyo Salaad? – Ku-simaha Madaxweynaha | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa tuma Sacdiyo Salaad? – Ku-simaha Madaxweynaha
Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa noqotay Kusimaha Madaxweynaha dalka, kaddib markii uu maanta safar dibadda u ambabaxay Madaxweyne Xasan Sheekh, iyadoo shalayna uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madoobe uu safar dibadda u baxay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka JFS, Xildhibaan Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee ku-sime Madaxweyne ka noqota Soomaaliya, kadib markii ay dalka ka baxeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa safar dibadda ah u baxay Sabatigii, halka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, uu maata u socdaalay dalka Imaaraadka, taasoo Xildhibaan Sacdiyo u sahashay in ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee jagada ku-simaha Madaxweynaha dalka qabata.
Sacdiyo waxa ay hore u noqotay gabadhii ugu horeysay ee qabata jagada Guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS, taasoo lagu sheegay tallaabo muujisay dadaalkeeda iyo ka jawaabista baahida loo qabo in Haweenku metelaad wanaagsan ku yeeshaan hay’adaha Dowladda iyo guud ahaan xukunnada dalka.
Sacdiyo waxa ay ka mid ahayd xildhibaannadii shantii sano ee la soo dhaafay, sida adag uga soo hor jeedday nidaamka Farmaajo, waxa ay qeyb ka ahayd, shaqsiyaad fara ku tiris ah, oo Feb 6, 2021, madaharaad ka dhigay gudaha xarunta Golaha Shacabka, xilli Farmaajo, ka jeedinayay, qudbad uu ku xalaaleysanayay muddo kordhin uu damacsanaa.
Xildhibaan Sacdiyo, waxaa lagu xasuustaa, hadal jeedinteedii maalintaas iyo baaqii ay u dirtay dadka ka soo jeeda Muqdisho, ee ku addanaa in ay iska dul-qaadaan rajiimka Farmaajo, oo markaas muddo kororsi sharco darro ah u dig iyo dab lahaa, waxayna dadaal iyo addin ah uga qeyb qaadatay in dalku uusan dib ugu laaban gacan kali-talis.
Kursiga ay hadda ku fadhiso ee Guddoomiye ku xigeynka 1-aad ee Golaha Shacabka, waxaa doonayay Fahad Yaasiin, wuxuuna si uusan tartan adag ula kulmin kuraastii Xildhibaannimo dhaafiyay shaqsiyaad ay ka mid yihiin Muudey, Bashiir Goobe, Dhalxa iyo Sheekhaalow, kuwaas oo qaarkood isaga kabo-qaad u ahaayeen.
Maanta waxa ay si rasmi ah ugu fadhisaa kursigii Fahad doonayay, waxa ay ku sime ka tahay kursigii Guddoonka Golaha ee Maxamed Mursal ka arrimin jiray isla-markaana uu Feb 6, 2021 isku dayay inuu iyada xarunta Villa Hargeysa ka raacdeeyo, halka ay sidoo kale ku sime ka tahay kursigii Farmaajo ku fadhiyay ee Madaxweynaha dalka.
Tension between Sudan & Ethiopia
News 29 June 2022 2:29